‘प्लाज्मा थेरापी रामवाण होइन’
विराटनगर, १८ भदौ । गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्लाज्मा थेरापी विधि प्रयोग गरिँदै आएको छ । प्रदेश १ मा पहिलो पटक वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा प्लाज्मा थेरापी गरिएको थियो । थेरापी गरिएका दुईजना संक्रमितको उपचार सफल हुन सकेन ।
प्लाज्मा थेरापी परीक्षणका क्रममै रहेकाले अहिले नै धेरै अपेक्षा गर्न नहुने वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको मेडिसिन विभागले जनाएको छ ।
मेडिसिन विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. सञ्जीवकुमार शर्माका अनुसार प्लाज्मा थेरापी परीक्षणकै दायरामा रहेकाले चमत्कारिक पाटो नभएको बताउछन् । उनका अनुसार कोरोना संक्रमितका लागि अन्तिम विकल्प थेरापी हो ।
नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र नेपाल संरकारसँगको संयुक्त कमिटीमा समेत रहेका शर्माले भन्छन्, ‘अन्य सबै उपचार प्रक्रिया असफल भए अन्तिम विकल्प प्लाज्मा थेरापी हो । तर यसरी लिइने विकल्प रामवाण हुन सक्दैन ।’
कोरोना संक्रमणमुक्त भएकाहरुको प्लाज्मा निकालेर संक्रमितमा प्रयोग गरिन्छ । केही बिरामी ठिक र केही बिरामी बेठिक भए थेरापीमा भर पर्न नहुने उनको बुझाइ छ ।
प्रतिष्ठानले दुईजनाको प्लाज्ना थेरापी विधिबाट उपचार गरेको छ । धरान–८ का ६८ र धरान–१५ का ६७ वर्षीय पुरुषमा प्लाज्मा थेरापी गरेको थियो । तर दुवैजनाको मृत्यु भदौ ६ र ७ गते भएको थियो ।
६७ वर्षीय पुरुषको परिवारका सदस्यका अनुसार उनको मृत्यु हुनुअघि प्रतिष्ठानमा रेमडिसिभर औषधिसमेत चलाइएको थियो ।
प्रा.डा.शर्माका अनुसार प्रतिष्ठानमा साउनदेखि हालसम्म सातजना संक्रमितमा सो औषधि प्रयोग गरिएको छ । जसमा पाँचजना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । दुईजनाको मृत्यु भएको छ ।
रेमडिसिभर, डेक्सामेथासोन जस्ता औषधि प्रयोग गरेरसमेत बिरामीको अक्सिजनको मात्रा पूरा नहुँदा प्लाज्मा थेरापीमा जाने गरिन्छ । यी औषधि नेपालमा सहजै नपाइने हुँदा बिरामीले आफैं उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । तर, औषधिका लागि आस्पतालले सिफारिस गर्नुपर्ने उनले बताए ।
डा. शर्मा भन्छन्, ‘उपचारका क्रममा औषधि आवश्यक पर्ने बिरामीको परिवारसँग समन्वय गर्छाै । ल्याउन सकेको खण्डमा औषधि लगाइदिने गर्छौ ।’